Israel oo Al Aqsa ka mamnuucday Madaxda Guddiga Masjidka • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Israel oo Al Aqsa ka mamnuucday Madaxda Guddiga Masjidka
Israel oo Al Aqsa ka mamnuucday Madaxda Guddiga Masjidka
Israel ayaa sheegtay in muddo dhan 40 maalmood ay ka mamnuucday in Masaajidka Al Aqsa uu tago Madaxa Guddiga maamula Masjidka Shiikh Abdel-Azeem Salhab iyo kuxigeenkiisa Shiikh Najeh Bkerat, kadib markii maamulka Al Aqsa ay fureen qeyb kamid ah masaajidka oo ay horey u xirtay Israel.
Israel ayaa muddo hada laga joogo 16 sano xirtay qeybo kamid ah daaraha ku dhagan Masjidka Al Aqsa oo qeyb ka ah xarunta Al Aqsa oo lagu magacaabo Babul Raxmah, Israel ayaa ku dooday in qeybtaasi ay horey saldhig uga dhigteen dhaq dhaqaaqyada Islaamiga ah ee la dagaalama Israel.
Balse maamulka Masjidka Al Aqsa ayaa go’aansaday in shacabka ay u furaan qeybtaasi, kadib markii ay soo shaac baxday in Yahuud Xagjirka ah ay doonayaan qeybtaasi kamid ah masaajidka ay la wareegaan.
Dowlada Urdun (Jordan) oo ah midda loo xilsaaray inay maamusho Masjidka iyo Guddiga maamula oo lagu magacaabo Waqf ayaa cambaareeyey cadaadiska Israel ku wado maamulka masaajidka.
Kadib markii ay Israel xoog kula wareegtay magaalada Qudus dagaalkii 1967dii ayaa heshiis ay saxiixday ah in Masaajidka Al Aqsa uu hoos tago Guddi u gaar ah oo ay maamusho dowlada Urdun, balse xagjirka Yahuuda ayaa dadaal ugu jira inay la wareegaan Masaajidka Al Aqsa oo ay doonayaan inay ka dhistaan Xarunta Masiixigooda ay sugayaan ee loo yaqaan Dajaal.
Bilihii lasoo dhaafay ayey hogaamiyayasha diinta Yahuuda qaarkood sheegayeen in la gaaray xiligii ay dhisi lahaayeen Qasriga ay ugu talo galeen masiixigooda oo ay sheegeen inuu dhawaan imaan doono.
Arrimahan ayaa sidoo kale kusoo beegmay xili lagu wado ay dhacdo Doorashada Israel horaanta bisha soo socota ee April.
Kooxahan iyo siyaasiyiinta xagjirka Israel ayaa doonaya inay awood ku yeeshaan xukuumada cusub si ay markaasi u qaadaan tilaabooyin cusub oo ay doonayaan inay kula wareegaan Masjidka Al Aqsa iyo gebi ahaan xarumaha ku yaal dhulka uu masaajidka ku fadhiyo.